Aviasales dia nandefa torolàlana ho an'ireo firenena nanokatra indray
Home » Lahatsoratra farany farany » Hostpost » Aviasales dia nandefa torolàlana ho an'ireo firenena nanokatra indray
Aviasales dia nampandeha ny fampiharana azy tamin'ny alàlan'ny torolàlana “Ok to go” izay mamaly ny fanontaniana hoe “Mahazo mandeha ve aho?” miaraka amin'ny fampahalalana avy amin'ny loharanom-baovao ofisialy.
Ny mpampiasa dia afaka mahazo angon-drakitra marobe, manomboka amin'ny sidina fiaramanidina mankany amin'ny famerana COVID-19 any amin'ny faritra iray.
Ahitana ny fampahalalana ilaina rehetra: na firenena misokatra ho an'ny mpizahatany, ny fomba hahatongavana any, na ny quarantine rehefa tonga dia voatery, karazana fiantohana na fitsapana COVID-19 inona no ilaina.
Politika hafa, toy ny lalàna momba ny saron-tarehy, curfew, ora fisokafan'ny trano fisakafoanana, sns.
Ny ekipa voatondro dia mandinika tsy tapaka sy manavao ny vaovao momba ireo firenena manokatra indray sy ireo fepetra takiana amin'ny fidirana. Ny endri-javatra dia tafiditra tanteraka ao amin'ny vokatra - miseho ny fameperana ny dia miaraka amin'ny fangatahana fikarohana. Ka manomboka izao, ny mpampiasa dia afaka mahazo angon-drakitra marobe, manomboka amin'ny sidina fiaramanidina mankany amin'ny famerana COVID-19 any amin'ny faritra iray.
Ny "Ok to go" dia misy ny fampahalalana rehetra ilaina: na firenena misokatra ho an'ny mpizahatany, ny fomba hahatongavana any, na ny quarantine rehefa tonga dia voatery, karazana fiantohana na fitsapana COVID-19 inona no ilaina, ary fombafomba hafa. Ny fiovaovan'ny takiana eo amin'ny faritra samihafa amin'ny fanjakana iray dia raisina ihany koa. Ohatra, i New York dia mitaky quarantine rehefa tonga, raha tsy manao kosa i Miami, ary Aviasales mampiseho ireo fahasamihafana rehetra ireo.
Ny politika hafa, toy ny lalàna momba ny saron-tarehy, curfew, ora fisokafan'ny trano fisakafoanana sns dia ampiharina amin'ny serivisy vaovao.